Medical Writings ဆေးပညာစာများ: Gallstones (2) သည်းခြေကျောက် (၂)
Gallstones (2) သည်းခြေကျောက် (၂)
Wed, Mar 7, 2012 at 12:21 PM
I was taken for an overall checkup and they told me I hadastone in my gall bladder. The physician told me that if it isn't giving me any trouble at present I shouldn't go and tamper with it. So the story ends there. But I suffer from nausea orafeeling of vomiting when I see oily food especially. I've just passed seventy and hadahysterectomy operation. The trouble isafeeling of fullness in my stomach and I have no appetite to eat anything. When my folks nag me for not eating anything I would try taking some oranges or pears or any other kind of fruit. Sometimes I ask them to buy me fruit drinks or bottled ones like lemon lime (Crusher) which I have never tasted in my life before. How can I get rid of this loss of appetite feelings, and is there really no cure for it? I've heard one of my friends complaining to me once how she had to bear the pain in her gall bladder when the stone passed through the bile duct and speaking frankly I wouldn't want to go through that kind of experience. So please help me doctor. By the way is it true that apple juice can soften up the stone in the bladder? I'm takingaglassful now everyday and the amazing thing about it is that the nauseous feeling is diminishing and I can eat about three or four spoonfuls of rice with plenty of soup.
Loss of appetite can be because of the Gallstones or of other reasons. Are your eyes and urine yellow? How long are you with this complaint, after Gallstone diagnosis or later? Have you told your physician about it? Any fruit juice is good for health.
လူတိုင်းမှာ အသဲအောက်နားမယ် သည်းခြေအိတ်ဆိုတာ ရှိကြတယ်။ ဗိုက်ရဲ့ အပေါ်ပိုင်း ညာဘက်မှာ နေတယ်။ သည်းခြေအိတ်ထဲက အရည်ကနေ ကျောက်ဖြစ်လာတတ်တယ်။ အဲဒီ အရည် Bile ဟာ စားလိုက်တဲ့အစာထဲမှာပါမဲ့ ဆီ-အဆီကို ချက်လုပ်ပေးတယ်။ Bile ကို အသဲကနေထုတ်ပေးပြီး Gall bladder သည်းခြေအိတ်မှာ လှောင်ထားတယ်။ လိုအပ်ချိန်ကျမှ Common bile duct ဆိုတဲ့ပြွန်ထဲကို သည်းခြေရည်တွေ ထွက်လာစေတယ်။ အူသိမ်အကွေးလေးထဲ ဝင်လာတယ်။ ပြွန်ဆိုတာက (၃) မျိုးရှိတယ်။ Hepatic ducts အသဲကလာတဲ့ပြွန်၊ Cystic duct သည်းခြေအိတ်ကပြွန် နဲ့ Common bile duct အဲဒီ ၂ ခုပေါင်ပြွန်။ နှစ်ခုပေါင်းပြွန်နဲ့ Pancreatic duct သရက်ရွက်ကလာတဲ့ပြွန် ကလာပေါင်းတယ်။
Bile ထဲမှာ ရေ၊ Cholesterol (ကိုလက်စထော)၊ Fats အဆီ၊ Bile salts သည်းခြေဆား၊ Proteins (ပရိုတင်း) နဲ့ Bilirubin (ဘီလီရူဘင်) ဆိုတာတွေပါနေတယ်။ Bile salts ကသာ အဆီကိုကျေချက်ပေးပြီး Bilirubin ပါနေလို့ ဝမ်းအရောင် ဝါညိုညို ဖြစ်စေတယ်။ Cholesterol, Bile salts နဲ့ Bilirubin များနေရင် Gallstones ကျောက်တည်နိုင်တယ်။
သည်းခြေကျောက် နှစ်မျိုးရှိတယ်။ (၁) Cholesterol stones စိမ်းဝါဝါအရောင်ရှိတယ်၊ ၈ဝ% ရှိတယ်။ (၂) Pigment stones က သေးတယ်၊ အရောင်မဲတယ်၊ Bilirubin (ဘီလီရူဘင်) ပါတယ်။ အရွယ်အစား သဲမှုံလေးလောက်ကနေ ဂေါက်သီးလောက်အထိ ဖြစ်နိုင်တယ်။ တလုံးထဲကနေ ရာဂဏန်းအထိ ဖြစ်နိုင်တယ်။ အမျိုး ၂ ခုတွဲလဲဖြစ်နိုင်တယ်။
• အမျိုးသမီးတွေမှာ ယောက်ျားတွေထက် ၂ ဆဖြစ်ရတယ်။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်ရတာ၊ (အီစထိုဂျင်) ဆေးပေးကုသခံရတာ၊ ကိုယ်ဝန်တားဆေးတွေကနေ ပိုဖြစ်စေသလား ယူဆတယ်။
• အမျိုးထဲမှာ တယောက်မကဖြစ်တတ်တယ်။ အသက် ၆ဝ ကျော်ရင် ပိုဖြစ်တယ်။ လူကဝရင် ပိုဖြစ်တယ်။
• အစားအသောက်ထဲမှာ အဆီနဲ့ (ကိုလက်စထော) များတာလဲ အပြစ်ဖြစ်နိုင်တယ်။
• ကိုယ်အလေးချိန် အမြန်လျှော့နည်းတခုဖြစ်တဲ့ Crash diets အစားအသောက်ကို အတင်းလျှော့ချနည်းကနေလဲ ဖြစ်စေနိုင်တယ်။ အသဲကနေ (ကိုလက်စထော) တွေ အပို ထုတ်ပေးရလိုဖြစ်မယ်။
• Cholesterol-lowering drugs (ကိုလက်စထော) ချဆေးတွေကနေလဲ ဖြစ်နိုင်တယ်။
• Diabetes ဆီးချိုရှိနေသူတွေမှာ Triglycerides တွေပိုများနေလို့ ပိုဖြစ်နိုင်တယ်လဲ ယူဆတယ်။
• ကျောက်ရှိနေသူမှာ နောက်ထပ်ကျောက် ထပ်ဖြစ်လာနိုင်တယ်။
အတော်များများ တခြားဟာအတွက် ဆေးစစ်ရင်နဲ့ သည်းခြေကျောက် လာတွေ့တတ်တယ်။ ဘာမှ မခံစားရသူက များတယ်။ အသက် ၆၅ နှစ်ကျော်သူတွေမှာ ၂ဝ% လောက်သာ ရောဂါလက္ခဏာတွေဖြစ်နိုင်တယ်။ ခံစားရရင်လဲ Dyspepsia အစာမကျေ၊ ရင်ကယ်နေမယ်။ Intolerance to fatty foods ဆီ-အဆီများတာကို စားရင် ပိုဆိုးတာ ခံစားရမယ်။ Belching and flatulence လေအောင့် လေတက်မယ်။
သည်းခြေရည် ထွက်ရမဲ့လမ်းကို လာပိတ်နိုင်တယ်။ ပြွန်တွေထဲမှာ သည်းခြေရည် ပိတ်နေရာကနေ ရောင်လာနိုင်တယ်။ သရက်ရွက်ကိုပါ ရောင်နိုင်သေးတယ်။ Gallstone Pancreatitis ဖြစ်ရင် အတင်းနာပြီး ဆိုးတယ်။ ရောဂါလက္ခဏာတွေ ဖြစ်လာရင် Fever ကိုယ်ပူ၊ Jaundice အသားဝါ၊ Persistent pain တောက်လျှောက်နာတာတွေ ခံစားရမယ်။ Cholecystitis သည်းခြေအိတ် ရောင်ခြင်း၊ Cholangitis သည်းခြေရည်ရောင်ခြင်း၊ Gangrene သည်းခြေအိတ် သွေးမရဖြစ်ခြင်းတွေလဲ ဖြစ်နိုင်တယ်။
ကျောက်က ပြွန်လမ်းကိုလာပိတ်ရင် ရုတ်တရက် ခံစားရတာတွေရှိလာနိုင်တယ်။ အဆီများတဲ့အစာ စားပြီးချိန်မှာ ဖြစ်တတ်တယ်။ ဗိုက်အပေါ်ညာဘက်နေရာ မှန်မှန်နာလာမယ်။ နောက် ပိုနာလာမယ်။ နာရီဝက်ကနေ နာရီများစွာ ကြာနိုင်တယ်။ နောက်ကျောနဲ့ လက်ပြင်ဆီလိုက်နာနိုင်တယ်။ ညာဘက်ပခုံးအောက်ကလဲ နာနိုင်တယ်။ ပျို့ချင် အန်ချင်ဖြစ်မယ်။ ကိုယ်ပူမယ်။ ချမ်းမယ်။ ဆီး-မျက်လုံးတွေဝါလာမယ်။ ဝမ်းအရောင်ပျော့လာမယ်။ ရွံ့ရောင် ခေါ်တယ်။ ပိတ်လို့နာတာကို Biliary colic ခေါ်တယ်။ ၈ဝ% သောလူနာတွေခံစားရတယ်။ ဖြေးဖြေးချင်းပိတ်ရင် အဲလိုမခံစားရဘူး။
X-rays ဓါတ်မှန်ရိုက်မယ်။ ဆေးထိုးရိုက်တာလဲရှိတယ်။ လိုအပ်ရင် Ultrasound (အာလ်ထွာဆောင်း) ရိုက်မယ်။ Computerized tomography (CT) scan လဲလုပ်နိုင်တယ်။ Infection and Rupture of the gallbladder or bile ducts ကိုပါသိမယ်။ Cholescintigraphy (HIDA scan) လဲလုပ်နိုင်တယ်။ Endoscopic retrograde cholangiopancreatography (ERCP) လုပ်ရင်း ကျောက်ကိုထုတ်ယူနိုင်တယ်။
Heart attack နှလုံး (အတက်ခ်) ရတာ၊ Appendicitis အူအတက်ရောင်တာ၊ Ulcers လေနာ၊ Irritable bowel syndrome အစာလမ်းရောဂါ၊ Hiatal hernia အထဲမှာ (ဟာနီယာ) ဖြစ်တာ၊ Pancreatitis သရက်ရွက်ရောင်တာ နဲ့ Hepatitis အသဲရောင်တာတွေနဲ့ ဆင်တယ်။ ခွဲခြားရမယ်။
(၁) Nonsurgical approaches မခွဲတဲ့နည်း
• ခွဲစိတ်ဘို့လိုပေမဲ့ ခွဲဘို့မသင့်သူတွေကိုသာ လုပ်ပါတယ်။ ၅ နှစ်နေရင် ပြန်ဖြစ်တတ်တယ်။
• Oral dissolution therapy ဆေးပေးနည်း။ Ursodiol (Actigall) နဲ့ Chenodiol (Chenix) ဆေးတွေက ကျောက် သေးတာအတွက်သာ ရတယ်။ Bile acid ဖြစ်တယ်။ Cholesterol gallstones ကိုသာရတယ်။ 1-1.5 cm diameter ထက်မကြီးမှရမယ်။ ၁-၂ နှစ် ကြာနိုင်တယ်။ ဆေးဖြတ်လို့ ပြန်ပေါ်နိုင်တယ်။
• Contact dissolution therapy ဆေးထိုးနည်းကို စမ်းသပ်သုံးကြည့်နေတယ်။ သည်းခြေအိတ်ထဲဆေးထိုးပြီး Cholesterol stones ကိုကျေစေမယ်။ Methyl tert-butyl ether ဆေးက ကျောက်ကို ၁-၃ ရက်အတွင်း ကျေစေနိုင်တယ်။
• Extracorporeal shock-wave lithotripsy (ESWL) နည်းကို ကျောက်က ပြွန်မှာပိတ်နောမှာ သုံးနိုင်တယ်။
(၂) Surgery ခွဲစိတ်ကုသနည်း
• Cholecystectomy သည်းခြေအိတ်ထုတ်ပြစ်နည်းမှာ Laparoscopy နည်းကိုသုံးတယ်။
• Open surgery သမားရိုးကျခွဲနည်းက ဗိုက်ဖွင့်ပြီးဖြတ်ထုတ်ရတယ်။ သည်းခြေအိတ်ရောင်နေတာဆိုရင်တော့ ဒီနည်းနဲ့ လုပ်ရတယ်။
• Gallbladder သည်းခြေအိတ်ကို ခွဲထုတ်ပေမဲ့ အသက်ရှင်နေနိုင်ပါတယ်။ သည်းခြေရည်ကို အသဲကနေ လုံလောက်အောင် ထုတ်ပေးနေမယ်။